द हेग मा अभिनेता संघ को कैबिनेट गठन को विफलता मार्टिन भिजल्याण्ड
घर » सामान्य » द हेग मा अभिनेता संघ को कैबिनेट गठन को विफलता
द हेग मा अभिनेता संघ को कैबिनेट गठन को विफलता
मई 18 मा पोस्ट गरिएको, 2017 भित्र सामान्य |
टिप्पणीहरू बाहिर छन् द हेग मा अभिनेता संघ को कैबिनेट गठन को विफलता को लागि
मान्छेलाई रोटी र खेल दिनुहोस्, टिभि, फुटबल, चलचित्र, संगीत, साबुन अपरेसन र लोकतान्त्रिकताको उपस्थिति। यो सबै हे हेगमा छ। मुस्कुराउने मुस्कानको साथ राम्ररी शिक्षित कुराकानी गर्ने व्यक्तिले तपाइँलाई एक लोकतान्त्रिक क्षेत्रमा बाँच्ने प्रभाव दिन्छ। निस्सन्देह, त्यो Drees पछि मामला भएको छ र केहि समय को लागि यो बाटो रहनेछ। अन्तमा, हामी हाम्रो डेमोक्रेटिक प्रणालीमा डचलाई विश्वास गर्छौं। यो काम गर्दछ र हामी एक समृद्ध देश छौं। युरोपको शाही घरहरू विभिन्न डेमोक्रेसीहरूमा उनीहरूको विवाहकोट गुड़ियाको पछि लुकाउन कसरी लुकेको छ र पोप क्याथोलिकसँग के हो भन्दा बढी कुरा देखा पर्दैन; तिनीहरू उपासना गरिएका छन् र उपासना गरे किनभने यो परम्परा हो। कुनै अन्य यादृच्छिक व्यक्ति जसले सुनको गाडी र मान्छेलाई माथि लैजानुपर्छ, चाँडोमा लुगा लगाइदिनेछ र पागल हुन्छ, तर हामी यो 1 प्रकार मानवहरूको लागि गर्दैनौं। तिनीहरू शाही छन्। त्यो शाही के हो? "खैर, जस्तै कि तिमी जन्मेका थिए। तपाईं त्यसबारे केही गर्न सक्नुहुन्न।"अब, ईश्वरको लागि, के तपाईं गम्भीर विचार गर्दै हुनुहुन्छ कि हामी केही मानिसहरूलाई शाही स्थिति प्रदान गर्दछौं र झण्डाहरू झैं। र सोच्नुहोस् कि क्या लोकतान्त्रिक वार्निशलाई वास्तविक शक्ति लुकाउनु हुँदैन? के तपाईं साँच्चै विश्वास गर्नुहुन्छ कि राजनीतिमा अभिनेता संघको पागलपन वास्तवमा होस? हरेक आधिकारिक कसमले सहभागी हुन कसलाई लिनु हुन्छ?
Bilderberg समूह को निर्माण को पछि कौन थियो; इम्बे प्रोजेक्टको साथमा Bilderberg समूह र अन्ततः यूरोपीय संघको गठनलाई समर्थन गर्यो? थप वर्दी व्यवस्था मार्फत संसारको एक पकड प्राप्त गर्न: यस वैश्वीकरण प्रक्रिया ठीक अभिजात वर्ग नियन्त्रण तर 1 लक्ष्य लिएको छ कि अझै बुझे छैन ईयू वा शक्ति को जारी centralization गलत केही छ सोच्छ जो कोहीले नियमहरू। डच शाही परिवार Bilderberg सभाहरूमा जग थियो र अझै पनि वैश्वीकरण प्रक्रिया मा पाइ मा एक ठूलो औंला छ। त्यो पुरा तरिकाले पुरातात्विक मा लागू हुन्छ। को धारावाहिक चुनाव अभियान, निर्वाचन संग्रामहरू जीतेको र (असफल) कैबिनेट formations तपाईंलाई लागि देशको राजनीतिज्ञ को राजनीतिक खेल बढाउने त, त्यहाँ मात्र गुडिया आफ्नो ध्यान आकर्षित गर्न चाहनुभएको छ र खेल कुरा छैन। जसरी पनि ब्रसेल्स विभिन्न देशहरूमा हुक्म र ब्रसेल्स नीति मुख्यतया देश स्तरमा जे निर्धारण, तर तथ्याङ्कले ब्रसेल्स मात्र वैश्वीकरण नीति आचरण एउटा सानो कुलीन समूह द्वारा dictated छ। त्यो विश्वव्यापी लागू हुन्छ एक नियम हो। यो फरुन रक्तचाप हो (हेर्नुहोस् यहाँ) शो चलाउन र राजनीतिक खेल, युद्धका खतराहरू, युद्धहरू, संकट र यतिसँग मीठा राख्ने। कुनै पनि व्यक्ति जो यस खेलको माध्यमबाट देख्न सक्दैन परिभाषा द्वारा Volkskrant, Trouw, Elsevier वा अन्य नामक गुणस्तर पानाहरू पढ्न जारी। त्यहाँ तपाई राम्रो तरिकाले प्रशिक्षित र राम्रो प्रशिक्षित धारणा प्रबन्धकहरूको कथाहरू पाउनुहुनेछ जसले परिचित तस्वीर अनुसार संसारको छविलाई निरन्तरता दिन्छ।
वास्तविक शक्ति एक प्रकारको पिरामिड मोडेल अनुसार बनाइएको छ। त्यसपछि हामी विश्वव्यापी शक्तिको बारेमा कुरा गर्दैछौं जो प्रायः थेसिस र एंटी-थेसिस को माध्यम ले केन्द्रित गर्दै छन्। हामी पनि हेगलियन डिजिकेटलाई पनि फोन गर्दछौं (हेर्नुहोस् यहाँ)। यसमा एक प्रकारको लिपि पछ्याइएको छ जुन धार्मिक भविष्यवाणीहरूमा पाइन्छ। विभिन्न धर्मका यी भविष्यवाणीहरू पनि थियोसिस र antithesis आधारित छन् र अन्ततः बिस्तारै मानवता को चेतना गर्न संश्लेषण नेतृत्व तिर मानवता त यो कहाँ यसलाई समाप्त गर्न थाह छ कि दबेको पर्छ र यो कसरी झुक्काएका बन्छ केन्द्रित शक्ति को संश्लेषण। यो केन्द्रित शक्ति पूर्ण रूपमा डिजिटाइज गरिनेछ र मानिसहरू शरीर र मस्तिष्कको साथ इन्टरनेटमा पर्खनेछन्। त्यसोभए कसैले यो केन्द्रीय नियन्त्रण प्रणालीसँग जोडिएको अधिक खरीद वा बेच्न सक्दैन। त्यो नयाँ केन्द्रीकरण शक्तिको नयाँ टेक्नोलोजी जैकेट हो। पिरामिडको शीर्षमा लुसिफर खडा हुँदा यो सिमुलेशनको बिल्डर छ जुन हामी हाम्रो ब्रान्डमा कल गर्छौं। धर्म र नयाँ आयु रूपमा उच्च आयोमी जाल वा विदेशी जात मा विश्वास मार्फत हाम्रो पृथ्वी मा कि राजनीतिक हस्तक्षेप नियन्त्रण संयन्त्र को डस तह फन्दामा बस आत्मा जागा मानिसहरू हुन्। 3-आयामी5सेन्सर अनुभव Windows तहमा हुन्छ। कि 3-आयामी 5- संवेदी Luciferian शक्ति र Merovingian अभिजात वर्ग (वेटिकन देखि संचालित संसारको धर्म मार्फत) वेटिकन द्वारा समन्वित छ वास्तविकता भित्र (मैट्रिक्स फिलिम ट्रिलजी मा Merovingian विचार)। यी मिश्रहरू फिरऊनका सन्तान हुन्। शाही रगत खण्डहरू (हेर्नुहोस् यहाँ)। तिनीहरू विश्वव्यापी राजनीतिक, वित्तीय र सैन्य शक्ति संरचनाको पछि लाग्छन्।
त्यो लुसिफरियन शक्ति वास्तवमा एक कृत्रिम बुद्धि जस्तै एक प्रकारको छ। गनोस्टिक्सले तीजहरूबारे छलफल गरे, इस्लाममा हामी डीजिनको बारेमा सुनेका छौं र मसीहीतामा हामी गिरिएका स्वर्गदूतहरू वा राक्षसहरूका बारेमा सुन्छौ। त्यो कृत्रिम बुद्धिले यो म्याट्रिक्स बनाएको छ जुन हामी हाम्रो भौतिक वास्तविकताको लागी विचार गर्छौं। त्यस वास्तविकताको अन्तर्गत, उल्लेख गरिएको फिरऊन सन्तानले पूजा पूजा गर्न दिन्छन्। Molach पूजा बाल पूजा रातो बुल पूजा पुरानो सूर्य पूजा यो ग्रह शनि को लागि सबै नाम हो, त्यो ग्रह सबै उन छतहरु संग जसको रेडियो सिग्नलहरु लाई बेपरिवर्तनीय छ। Hiepdepiep HoeRa (Ra का उद्धार, शनि को उद्धार, लुसिफरको उद्धार)! यो उपासना यो समुहले हलिवुड को माध्यम ले चमक दिन्छ, तर यो धार्मिक प्रतीकमा पनि अनुमति दिन्छ। तिनीहरूले पूजा गर्थे, जस्तै थिए, मुख्यफ्रेम पोर्ट / फायरवाल शनि; मुख्यफ्रेम जसमा सिमुलेशन चलाउँछ जुन यस भौतिक संसारलाई राख्छ र नियन्त्रण गर्दछ। धर्मशास्त्रमा के हो भने पुरातत्वको रूपमा वा Gnostics द्वारा पुरातत्वको रूपमा कृत्रिम बुद्धिको रूपमा मान्न सकिन्छ। एक खेल खेलाडी एक VR चश्मा मार्फत देख र यस 5-आयामी वास्तविकता हाम्रो 3-संवेदी धारणा खेल संग चिनाउँछ। हाम्रो प्राणले यो सिमुलेशन कोसिस गर्न खोजेको छ। हाम्रो आत्मा अपलोड भएको अनुकरणमा मुख्यफ्रेम गेट साईट द्वारा फायरवाल हुन्छ। शनि हामीलाई हाम्रो मूलबाट टाढा राख्छ र हामीलाई यो 3-आयामी 5-सेन्सर आत्माको जेल भित्र राख्छ। सबै शनि प्रतीकमा एक नजर लिनुहोस् कि तपाईं कम्पनी लोगो वा धार्मिक प्रतीकत्वमा हेर्न सक्नुहुन्छ (लुकेको) यहाँ en यहाँ)। यो आत्मा जेल भित्र (लुसिफरद्वारा निर्मित) हाम्रो जैविक अवतार यस्तो तरिकाले निर्माण गरिएको छ जुन आत्माले यसको साँचो क्षमता र अभिव्यक्तिको स्वरूप अनुभव गर्दैन। यसैले मस्तिष्क वा डीएनए को ठूलो भागहरू अप्रयुक्त जस्तो देखिन्छ।
तथापि, 1 जडान जुन हाम्रो चेतना जागिर सक्छ। त्यो ...